Slip Rings, Rotary Majoini, Maindasitiri Slip Rings - AOOD
Yemauto Slip Rings
Aerospace Yemauto Slip Rings
Yemauto Capsule Slip Rings
Yakakwira Frequency Rotary Majoini
Waveguide Michina majoini
Fiber Optic Michina majoini
Fiber Optic Mbeu dzakauchikwa Slip Rings
Marine kutedzemuka Rings
Kuburikidza neBore Slip Rings
Yekumhanyisa Super Super Miniature Slip Rings
Yakakwira Tsananguro Slip Rings
Ethernet kutedzemuka Rings
Pancake kutedzemuka Rings
Yakaparadzaniswa Slip Rings
Yekumhanyisa Slip Rings
Yakakwira Temperature Slip Rings
Huru Bore Slip Rings
Elecrical Inotenderera Zvinobatanidza
Gasi Fluid Yakabatanidzwa Slip Rings
Tsika Slip Rings
Kuvaka & Zvekurima
Kucheka-kumucheto tekinoroji kwagara kuri iko musimboti webudiriro yeAOOD kubvira patakatangisa.
Kugadziridza uye kuvandudza kwagara kuchishandiswa mukugadzirwa kwemasokisi eAOOD.
AOOD vanovavarira kupa yakanakisa sevhisi kune vatengi vedu.
AOOD TECHNOLOGY LIMITED yakavambwa mu2000 kugadzira uye kugadzira masiringi. Kusiyana nemamwe makambani mazhinji ekugadzira uye ekugadzirisa, AOOD inyanzvi yehunyanzvi uye hunyanzvi-hwakavakirwa mutserendende unogadzira uye mutengesi, isu taigara tichitarisa paR & D yepamusoro-magumo yakazara 360 ° rotary interface mhinduro dzemabhizimusi, zvekurapa, zvekudzivirira uye zvekushandisa mugungwa.
Runhare: +86 755 29527430
■ Simba R & D kugona
■ Hwakavimbika uye hunowirirana mhando
■ Kukurumidza kuendesa
■ Sevhisi yekuvimbika-yekutengesa
Yakakwira Hunhu & Mari Inobudirira ROV Slip Rings
Dhizaini dhizaini uye inogadzira mhando yepamusoro uye inodhura masvomhu eROV slip mhete kwemakumi emakore. Isu tinogara tichivandudza edu akajairwa ROV kutedzemuka mhete uye kugadzira zvigadzirwa zvitsva kusangana nezvinodiwa. Yedu yeRoV slip mhete mhinduro dzinosanganisira emagetsi ekutsvedza mhete, maFOJs, majuru anotenderera majoini / swivels kana musanganiswa wemagetsi, wekuona uye wemvura. & nbs ...
Zvishanu Zvinhu Zvikuru Zvinokanganisa iyo Slip Ringi Inoshanda yehupenyu
Chindori chinotsvedza mubatanidzwa we rotary uyo waimbopa kubatana kwemagetsi kubva pakamira kusvika papuratifomu inotenderera, inogona kuvandudza mashandiro emagetsi, kurerutsa mashandiro ehurongwa uye kubvisa tambo dzinokanganisa-dzakarembera dzakarembera kubva kujoini dzinofamba. Slip mhete dzinoshandiswa zvakanyanya mu nharembozha kamera kamera masystem, robotic maoko, semi-ma conductor, anotenderera tebhu ...
Wide Zvikumbiro zveCompact Capsule Slip Rings
Chii chinonzi chindori? Chindori chinotsvedza chishandiso chemagetsi chinobvumidza madhigirii mazana masere pasingagumi paunenge uchichinjisa simba, chiratidzo, data kana midhiya kubva pachikuva chakamira kuenda kuchikuva chinotenderera, chakakosha chinotenderera chakabatana kana chemagetsi chemagetsi kune mazhinji mafambiro ekudzora masisitimu. Compact kapuleti kutedzemuka mhete dzinowanzove nefir ...